Romantic ဆန်ဆန်ပြောဖို့ အချစ်အကြောင်း အီဒီယံ (၁၀) မျိုး
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးချစ်သူလေးကို အင်္ဂလိပ်လို romantic ဆန်ဆန် ပြောလို့ရအောင် love idioms များကို လေ့လာဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
၁. A match made in heaven - နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို အတွဲညီပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖြတ်သန်း ကြမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ( ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ကံကြမ္မာက နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ပြီးသား လို့ဆိုပါတယ်။
၂. To fall head over heels in love - လုံးဝကို ချစ်မိနေပြီတဲ့။ ကိုယ့်အောက်က ကမ္ဘာမြေကြီးတောင် ပျောက်သွားပြီး ကျွမ်းပြန်သွားလောက်အောင်ကို ချစ်မိသွားပြီတဲ့။
၃. To be smitten with someone - အစွဲကြီးစွဲမိနေပြီ။ အချစ်လှောင်အိမ်မှာ ပိတ်မိနေပြီတဲ့။ စားလဲဒီစိတ်၊ သွားလဲ ဒီစိတ်၊ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရဘူးတဲ့။
၄. To be the apple of someone’s eye - ဒါကတော့ အချစ်ခံရတာကို ပြောတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိဘတွေရဲ့ အချစ်ကို ခံရတာကို ပြောတာ။
Yamin can do no wrong. She is the apple of her father’s eye.
၅. To beasoul mate - တစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ် ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်က ကောင်းကောင်း သိတယ်။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်လို့ ပြောရမလားပဲနော်။
၆. To take one’s breath away - အသက်ရှုတောင် ရပ်သွားလောက်အောင် လှလွန်းလို့၊ မြင်မြင်ချင်း သိပ်သိပ် ချစ်မိသွားပြီတဲ့။ ပိုပြီး romantic ဖြစ်သွားအောင် Berlin ရဲ့ သီချင်းလေး “ Take my breath away” ပါ နားထောင်လိုက်ပါဦး။
၇. To be someone’s one and only - တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆိုပိတောက် ပါဘဲတဲ့။ မင်းလေးက ကိုယ့်အတွက် အနှိုင်းမဲ့ပါပဲတဲ့။
You will always be my one and only one.
၈. To haveacrush on someone - အရူးအမူးချစ်မိနေပြီ။ ဒီအခြေအနေက teenage တွေ စိတ်ကစားတဲ့ အရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ စွဲလမ်းမှုပါ။
၉. To fancy someone - ဒါကရိုးရိုး ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်တဲ့ ကြိုက်တယ်လို့ အိနြေ္ဒရရ ပြောတဲ့ အသုံးပါဘဲ။
၁၀. To love someone with all of one’s heart and soul - ဒါကတော့ အသည်းနှလုံးရော၊ ဝိဥာဉ်ရော ပုံပြီး ချစ်တယ်လို့ ကဗျာဆန်ဆန်လေး ပြောတာပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ အခဈြဆုံးခဈြသူလေးကို အင်ျဂလိပျလို romantic ဆနျဆနျ ပွောလို့ရအောငျ love idioms မြားကို လလေ့ာဖို့ ဖျောပွပေးလိုကျတယျနျော။
၁. A match made in heaven - နနေဲ့လ၊ ရှနေဲ့မွလို အတှဲညီပွီး ပြျောရှငျဖှယျ ဘဝတဈခုကို တညျဆောကျဖွတျသနျး ကွမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ( ဘဝလကျတှဲဖျောကို ကံကွမ်မာက နဂိုကတညျးက သတျမှတျပွီးသား လို့ဆိုပါတယျ။
၂. To fall head over heels in love - လုံးဝကို ခဈြမိနပွေီတဲ့။ ကိုယျ့အောကျက ကမ်ဘာမွကွေီးတောငျ ပြောကျသှားပွီး ကြှမျးပွနျသှားလောကျအောငျကို ခဈြမိသှားပွီတဲ့။
၃. To be smitten with someone - အစှဲကွီးစှဲမိနပွေီ။ အခဈြလှောငျအိမျမှာ ပိတျမိနပွေီတဲ့။ စားလဲဒီစိတျ၊ သှားလဲ ဒီစိတျ၊ ဘယျလိုမှ မလေို့မရဘူးတဲ့။
၄. To be the apple of someone’s eye - ဒါကတော့ အခဈြခံရတာကို ပွောတာပါ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ မိဘတှရေဲ့ အခဈြကို ခံရတာကို ပွောတာ။
၅. To beasoul mate - တဈယောကျရဲ့ အတှငျးစိတျ ခံစားခကျြတှကေို တဈယောကျက ကောငျးကောငျး သိတယျ။ နှဈကိုယျ့တဈစိတျလို့ ပွောရမလားပဲနျော။
၆. To take one’s breath away - အသကျရှုတောငျ ရပျသှားလောကျအောငျ လှလှနျးလို့၊ မွငျမွငျခငျြး သိပျသိပျ ခဈြမိသှားပွီတဲ့။ ပိုပွီး romantic ဖွဈသှားအောငျ Berlin ရဲ့ သီခငျြးလေး “ Take my breath away” ပါ နားထောငျလိုကျပါဦး။
၇. To be someone’s one and only - တဈယောကျဆိုတဈယောကျ၊ ပိတောကျဆိုပိတောကျ ပါဘဲတဲ့။ မငျးလေးက ကိုယျ့အတှကျ အနှိုငျးမဲ့ပါပဲတဲ့။
၈. To haveacrush on someone - အရူးအမူးခဈြမိနပွေီ။ ဒီအခွအေနကေ teenage တှေ စိတျကစားတဲ့ အရှယျမှာ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ အပျေါစိတျဝငျစားတဲ့ အရှယျမှာ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ စှဲလမျးမှုပါ။
၉. To fancy someone - ဒါကရိုးရိုး ဗွိတိသြှ အင်ျဂလိပျအချေါအဝျေါဖွဈတဲ့ ကွိုကျတယျလို့ အိန်ဒွရေရ ပွောတဲ့ အသုံးပါဘဲ။
၁၀. To love someone with all of one’s heart and soul - ဒါကတော့ အသညျးနှလုံးရော၊ ဝိဉာဉျရော ပုံပွီး ခဈြတယျလို့ ကဗြာဆနျဆနျလေး ပွောတာပါ။
Read 10239 times Last modified on Thursday, 12 October 2017 11:37
မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ